Malunga nathi-Ii-Shenzhen Morc Controls Co, Ltd.
Umlawuli weFilter yoMoya
Ukunciphisa umda kwiBhokisi
Shenzhen MORC Controls Ltd, ngumvelisi oyingcali wezinto ezilawula i-valve. Ukusukela ekusekweni kwayo ngo-2008, inkampani yaxhotyiswa ngamaqela amaninzi ophando lwezesayensi kunye nezixhobo ze-R & D zokugqibela kunye nezixhobo zovavanyo zokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Itekhnoloji yayo ebalaseleyo kunye nenkonzo yokubonelela, sinceda abathengi ukuba baphucule ixabiso labo ngokukhawuleza.
Uluhlu lweemveliso lubandakanya i-valve positioner, i-solenoid valve, umda switch, umlawuli wokucoca umoya, i-pneumatic & i-activator yombane njalo njalo, esetyenziswa kakhulu kubunjineli petrochemical, irhasi yendalo, amandla, isinyithi, ukwenziwa kwamaphepha, ukutya, amayeza, unyango lwamanzi kunye namanye amasimi. Kwangelo xesha, ukubonelela ngeeseti ezifanelekileyo zezisombululo zazo zonke iintlobo zobunjineli bobuchwephesha.
Inkampani idlulise i-ISO9001 yolawulo lomgangatho kunye noqinisekiso lwe-ISO14001 yolawulo lwendalo, kwaye iimveliso zayo zifumene i-CE, ATEX, NEPSI, SIL3 kunye nolunye uqinisekiso kunye nokhuseleko.
Ngophuhliso olukhawulezileyo lokukhula, ukuqhutywa kwezinto ezizenzekelayo kunye nobukrelekrele kwihlabathi, i-MORC iya kubambelela kumbono wophuhliso "loMgangatho wokuqala, iTekhnoloji yokuqala, ukuphuculwa okuqhubekayo, ukoneliseka komthengi", kunye nokubonelela ngoncedo ngobuchule kunye nenkonzo kubathengi ukuba basebenzise iimveliso ngcono. , iya kuba luphawu lwehlabathi lwezinto eziphambili ze-valve.
I-2019,01 ifunyenwe i-ISO9001: I-Cerfiticate yoLawulo loMgangatho ka-2015.
2018.12 ifunyenwe i-ISO14001: Isiqinisekiso seNkqubo yoLawulo lokusiNgqongileyo yowama-2015.
Ngo-2017.08 Ndigqibile ukwakhiwa kwelebhu ndayibeka yona.
I-2017.06 eqinisekisiweyo ye-SIL3 yeeValthi zeSolenoid kunye noMda wokuTshintsha kweBhokisi.
Ngo-2016.07 Bafumana isatifikethi sokungena kwinqanaba lesizwe kunye ne-shenzhen.
Ngo-2016.07 Ifunyenwe ingxowa mali ekhethekileyo exhaswa yi-Shenzhen kwikamva lshishini.
Ngo-2015.12 ifunyenwe i-ISO 9001: 2008 yokuqinisekiswa kwenkqubo yolawulo.
Ngo-2015.09 Andiswa kwisakhiwo esakhiweyo se-MORC.
Ngo-2014.07 Ilungelo lokushicilela lokucoca ulwelo olunamalungelo obunikazi kunye ne-solenoid vale kwaye iqinisekiswe ilungelo lokushicilela.
Ngo-2014.04 kufunyanwe isiqinisekiso se-CE salo lonke uluhlu lweemveliso.
Ngo-2012.06 uzuze isiqinisekiso senkampani encinci kunye naphakathi.
Ngo-2010.05 Uphuculo lolawulo lwenkqubo ye-ERP.
Ngo-2008.10 Kumiselwe i-Shenzhen Morc Controls Co, Ltd.
USHENZHEN MORC UMNIKELWANO CO., LTD